Noocyo Beer ah | November 2019
Ugu Weyn Ee Noocyo Beer ah
Beetroot waa dhaqan aad u fara badan. Waxaa jira dhowr nooc oo dhaqameedkan ah, waxayna dhammaantood kala duwan yihiin muuqaalkooda, dhadhanka, iyo baaxadda. Xaraaraddaas, oo aan u isticmaalno karinta cuntada, waxaa loo yaqaan qolka qadada. Dabocase calafka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada ee xayawaanka guryaha.
Qeexida iyo beerista xididada Pablo
Beeraha waxaa laga arki karaa miiska mid kasta oo dalka ka mid ah. Waxaa lagu daraa suxuunta koowaad iyo kan labaad, saladh, sababtoo ah dalaggaani waa mid caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Maanta, kaalinta Pablo F1 kala duwan ee dabocase miiska ayaa sii kordhaya caan u ah sii kordhaya on ay garab. Wixii ku saabsan isaga iyo in laga sii hadli doonaa dheeraad ah.
Noocyada caadiga ah ee dabocase calafka
Of dhammaan noocyo dabocase, cawska waxay qaadataa meel qiimo leh. Waa cunto aan lagama maarmaanka u ah jiilaalka xayawaanka. Waxay ku adkaatay lo'da caanaha, doofaarrada, bakaylaha, fardaha. Warshadu waxay hodan ku tahay fiber, pectin, fiber fiber, carbohydrates, macdanta macdanta iyo borotiinka. Beeraha ayaa si weyn u kordhiya dhalidda caanaha inta lagu jiro xilliga xayawaanka quudinta leh quudinta qalalan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo Beer ah 2019